पोखरामा खुल्यो स्कोडाको शोरुम, उद्घाटनमै ६ वटा गाडी विक्री – Nagen News
Nagen News २०७८, २८ श्रावण बिहीबार August 12, 2021 307 Views
पोखरा । जर्मनी प्रविधिको स्कोडा गाडीको शोरुम पोखरामा खुलेको छ । पोखराको नयाँबजारस्थित एस.एस.एल.मोटर्स प्रा.लि.स्कोडाको लागि पोखरा क्षेत्रको आधिकारिक बिक्रेता तय भएको छ ।
स्कोडाको कुशाक एसयूभी २ साता अगाडि मात्रै नेपाली बजारमा सार्वजनिक भएको हो । एक्टिभ, एम्बिसन र स्टाइल गरी तीन ट्रिममा उपलब्ध हुने स्कोडा कुशाक सबै गरी ५ भेरिएन्टमा बजारमा उपलब्ध छन् । स्कोडा कुशाकको सुरुवाती भेरिएन्ट एक्टिभ म्यानुअल ट्रान्समिसनको मूल्य ४९ लाख ९० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । एम्बिसन म्यानुअल ट्रान्समिसनको मूल्य ५३ लाख ९० हजार र अटोमेटिक ट्रान्समिसनको मूल्य ५८ लाख ९० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । स्टाइल म्यानुअल ट्रान्समिसनको मूल्य ६० लाख ९० हजार र अटोमेटिक ट्रान्समिसनको मूल्य ६५ लाख ९० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
नेपालमा बुकिङ एक सय २३ गाडीमध्य ७५ गाडी बिक्री भइसकेको छ ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष अर्जुन पोखरेलले शोरुमको उद्घाटन गर्दै जर्मन प्रविधिको स्कोडा गाडी पोखरा क्षेत्रमा थप लोकप्रिय हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सरकारको निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण सकारात्मक हुनपर्ने औल्याउनुभयो ।
स्कोडाको लागि नेपालको आधिकारिक वितरक एमएडब्ल्यु इन्टरप्राइजेजले एस.एस.एल. मोटर्सलाई बिक्रेता नियुक्त गरेको हो । पोखराको नयाँबजारमा रहेको एस.एस.एल. मोटर्सले स्कोडा गाडीको बिक्री तथा बुकिङ सुरु गरिसकेको छ । डिलर सुरु गरेसँगै प्रा.लि.ले स्कोडाको बहुप्रतिक्षित एसयुभी कुशाकको बुकिङ पनि सुरु गरिसकेको निर्देशक सूर्यप्रसाद बरालले जानकारी दिनुभयो ।
उद्घाटन कार्यक्रममा स्कोडाको ६ वटा गाडी विक्री भएको छ । जसमा, समाधान मिडिया प्रा.लि.का अध्यक्ष उमानाथ बराल पोखराको पहिलो खरिद कर्ता रहनुभएको छ ।
कार्यक्रममा कम्पनीको गाडी प्रयोगकर्ता एवं समाधान मिडिया प्रा.लि.का अध्यक्ष उमनाथ बरालले ड्राइभिङ्गमा सहजता हुने भएकाले स्कोडी आफ्नो रोजाई भएको बताउनुभयो । एमएडब्ल्यु इन्टरप्राइजेज स्कोडा डिभिजनका डिलर मेनेजर विजय थापाले कमिकमजोरी सुधार्दै उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरिने प्रतिवद्वता व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रममा आदर्श समाज दैनिकका प्रधान सम्पादक कृष्णप्रसाद बास्तोलाले व्यवसायको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
यसको इन्टेरियर चालकलाई सहज बनाउन राखिएको “सिम्प्ली क्लेभर” फिचर भएको आधुनिकता र सुन्दरताको उत्कृष्ट संयोजन हुनेछ । यसमा १०।० इन्चको टचस्क्रिन इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम, सनरुफ, भेन्टिलेटेड सिट, एम्बायन्ट लाइटिङ, कुल्ड ग्लोबबक्स, ५० वाटको सबवुफरसहितको सिक्स स्पिकर छ ।
सुरक्षाका लागि यसमा ६ एअरब्याग, रियर पार्किङ क्यामेरा, आइसोफिक्स चाइल्ड सिट माउन्ट, अटो हेडल्याम्प र वाइपर र मल्टिकोलिजन ब्रेकिङ सिस्टम छ । इएससी सबै भेरिएन्टमा हुनेछ जुन सेग्मेन्टमै पहिलो हो । साथै यसमा टायर प्रेसर मनिटरिङ र हिल होल्ड असिस्ट पनि हुनेछ । स्कोडा कुशाकमा १।० लिटरको सबैभन्दा बढी पुरस्कृत टीएसआई इन्जिन हुनेछ, जसले ११५ बीएचपी र १७८ एनएम टर्क उत्पन्न गर्नेछ जुन सेग्मेन्टमै सबैभन्दा बढी हो । टीएसआई इन्जिन ६ स्पिड म्यानुअल र अटोमेटिक ट्रान्समिसनमा उपलब्ध हुनेछ । शोरुममा कुशाकसँगै र्यापिड गाडी पनि बिक्रीका लागि उपलब्ध छ ।
गोपाल बरालको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रम लक्ष्मी बरालले सञ्चालन भएको थियो ।